आहा रारा गोल्डकप आजदेखि सुरु, विदेशीसहित १२ टोली सहभागी
Published: January 19, 2016 09:48 AM
काठमाडौं, माघ ५ । आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको १४ औं सस्करण पोखरामा मंगलबार(आज)देखि सुरु हुँदैछ । सहारा क्लब पोखराले आयोजना गर्दै आएको प्रतियोगिताको यो संस्करणमा तीन विदेशीसहित १२ टोली सहभागि छन् । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज आयोजक सहारा क्लबले सिमराको नज जनजागृती युवा क्लबको सामना गर्नेछ । प्रतियोगिताको...
बंगबन्धु गोल्डकपमा आज नेपालले माल्दिभ्सको सामना गर्ने
Published: January 19, 2016 13:38 PM
काठमाडौं, माघ ५ । बंगलादेशमा जारी बंगबन्धु गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा आज(मंगलबार) नेपालले माल्दिभ्सको सामना गर्नेछ । प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ को उप–विजेताका रूपमा नेपालले समूह ‘बी’ को विजेता माल्दिभ्सलाई प्रतिद्वन्द्वी पाएको हो । नेपालले समूह चरणमा बंगलादेश र मलेसियाको फेल्डा...
प्रजापति नेपाल खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार बाँस्कोटालाई
Published: January 18, 2016 12:07 PM
पाँचथर,माघ ४ । स्वर्गिय प्रजापति नेपाल खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार’ पाँचथरका पत्रकार भीम बाँस्कोटालाई प्रदान गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा पुरयाएको योगदानको प्रशंसा गर्दे बाँस्कोटालाई उक्त पुरस्कार शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमका वीच प्रदान गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा पाँचथर अध्यक्ष लवदेव ढुंगानाले वताए । उक्त...
सुवारेजको ह्याट्रिकसँगै बार्सिलोनाको शानदार जित
Published: January 18, 2016 09:38 AM
काठमाडौं, माघ ४ । स्पेनिस लिग फुटबलअन्तर्गतका खेलहरुमा शीर्ष क्लवहरु बार्सिलोना, रियल मड्रिड विजयी भएका छन् । लिगको अंक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले एथ्लेटिक बिल्बाओलाई ६–० ले पराजित ग¥यो । बार्सिलोनाका लागि लुईस सुवारेजले ह्याट्रिक गरे भने लियोनल मेस्सी, नेईमार र इभाँ राकिटिचले एक–एक...
लास पालमसको पोष्टमा एथ्लेटिको मड्रिडको ३ गोल
Published: January 18, 2016 08:00 AM
काठमाडौं, माघ ४ । स्पेनिस ला लिगा फुटबलअन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा शीर्ष स्थानको एथ्लेटिको मड्रिड विजयी भएको छ । एथ्लेटिको मड्रिडले लास पालमसलाई ३–० ले हराएको हो । खेलको १७ औं मिनेटमा फिलिपे लुइसले गोल गर्दै एथ्लेटिकोलाई सुरुआती अग्रता दिलाए । दोस्रो हाफको ६८ र ८९ औं...
टेनिसमा पनि म्याच फिक्सिङ !
Published: January 18, 2016 14:40 PM
लन्डन, माघ ४ । क्रिकेट, फुटबल लगायतका खेलमा ‘म्याच फिक्सिङ’ गरिएको प्रसंग बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक टेनिसमा पनि फिक्सिङ भएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । बेलायती संचारमाध्यम बीबीसीका अनुसार विश्व टेनिसका शीर्ष प्रतियोगितामा ‘म्याच फिक्सिङ’ गरिएको प्रमाण उसले फेला पारेको छ...
वायन रुनीको निर्णायक गोलले म्यानचेस्टर युनाईटेड विजयी
Published: January 18, 2016 07:38 AM
काठमाडौं, माघ ४ । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाईटेडले लिभरपुललाई पराजित गरेको छ । आइतबार राति लिभरपुलको मैदान एन्फिल्डमा भएको खेलमा पाहुना टोली म्यानचेस्टर युनाईटेड १–० ले विजयी भयो । खेलमा म्यानचेस्टर युनाईटेडका लागि वायन रुनीले निर्णायक गोल गरे । आइतबार...
गुप्टिल र विलियम्सनको कीर्तिमानी साझेदारीसँगै न्युजिल्याण्डको सनसनीपूर्ण जित
Published: January 17, 2016 17:56 PM
ह्यामिल्टन, माघ ३ । न्युजिल्याण्डले पाकिस्तानविरुद्धको दोस्रो टि–ट्वेन्टी क्रिकेटमा १० विकेटको सनसनीपूर्ण जित हासिल गरेको छ । जितसँगै ३ खेलको ट्वेन्टी–ट्वेन्टी क्रिकेट शृङ्खलामा न्युजिल्याण्डले १–१ को बराबरी गरेको छ । न्युजिल्याण्डको ह्यामिल्टनमा आज दिउँसो सम्पन्न खेलमा पाकिस्तानले प्रस्तुत गरेको...
भारतविरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेट शृङ्खला अष्ट्रेलियाको कब्जामा
Published: January 17, 2016 19:01 PM
मेलबर्न, माघ ३ । भारतबिरुद्ध लगातार तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा जित दर्ता गर्दै अष्ट्रेलियाले पाँच खेलको एक दिवसीय शृङ्खला आफ्नो पक्षमा पारेको छ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न तेस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा आज घरेलु टोली अष्ट्रेलियाले भारतलाई ३ विकेटले पराजित गरेको हो । खेलमा...
Published: January 17, 2016 15:22 PM
पोखरा, माघ ३ । पोखरामा मंगलबारदेखि शुरु हुने १४ औं आहा रारा गोल्डकप फुटवलको तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएका छन् । आयोजक सहारा क्लवले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताको तयारीबारे जानकारी दिएको हो । गोल्डकपका विजेताले पाँच लाख एक हजार नगदसहित शिल्ड प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै उपविजेताले दुई लाख ५१ हजार रुपैयाँ...
आज राति रियाल मड्रिड र बार्सिलोनाको परीक्षा
Published: January 17, 2016 13:46 PM
काठमाडौं, माघ ३ । स्पेनिस लिग ला लिगा फुटबलमा आज(आइतबार) उपाधी दाबेदार रियाल मड्रिडले स्पोर्टिङ गियोनको सामना गर्दै छ । खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने ९ बजे रियालको मैदानमा हुनेछ । ला लिगा फुटबल अन्तर्गत राति ११ बजे एथलेटिको मड्रिड र लापलमस तथा गेटाफे र इस्पानुयल भिड्दै छन् । उता...
म्यानचेस्टर सिटीले गर्‍यो क्रिष्टल प्यालेसमाथि ४ गोल
Published: January 17, 2016 07:43 AM
काठमाडौं, माघ ३ । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले क्रिष्टल प्यालेसलाई ४–० ले हराएको छ । आफ्नै मैदानमा भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीलाई विजयी गराउन सर्जीयो अगुएरोले दुई गोल गरे भने डेभिड सिल्भा र फवियन डेल्फले एक–एक गोल गरे । प्रिमियर...
पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्ता घले सम्मानित
Published: January 16, 2016 19:06 PM
काठमाडौं, माघ २ । राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका वाइबी घले (यमबहादुर)लाई फ्युचर स्टार हाइ स्कुल, जावलाखेलले शनिबार नगदसहित सम्मान गरेको छ ।फ्युचर स्टारको वार्षिक खेलकुद दिवसका अवसरमा घलेलाई जावलाखेलमा सम्मान गरिएको हो ।राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वगोलरक्षक एवं छैटौं दक्षिण एसियाली महासंघीय...
नेपालको भिडन्त माल्दिभ्ससँग
Published: January 16, 2016 19:03 PM
काठमाडौं, माघ २ । बंगलादेशमा जारी बंगबन्धु गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ ।समीकरणअनुसार नेपालको प्रतिद्वन्द्वी माल्दिभ्सको यु–२३ टिम परेको छ । प्रतियोगिताको समूह ‘ए’को उप–विजेताकारूपमा नेपालले समूह ‘बी’को विजेता माल्दिभ्सको ओलम्पिक टिम प्रतिद्वन्द्वी पाएको हो । ...
ताप्लेजुङले चुम्यो फाल्गुनन्द गोल्डकप फुटबलको उपाधि
Published: January 16, 2016 18:28 PM
पाँचथर, माघ २ । पूर्वाञ्चलस्तरीय फाल्गुनन्द गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कर्णसिंह सोनाम मेमोरियल ताप्लेजुङले जितेको छ ।पाँचथरको फिदिममा शनिबार भएको फाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन फिदिम स्पोर्टिङ क्लब पाँचथरलाई २–० ले पराजित गर्दै ताप्लेजुङले उपाधि चुमेको हो ।ताप्लेजुङका जितमा पहिलो हाफको ८औं मिनेटमै रोजिन धिमालले गोल...